၁၆ ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလက်စ် ရဲ့ အလှူ ဒေါ်ဖွား သီလရှင်ကျောင်းလေးသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ၁၆ ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလက်စ် ရဲ့ အလှူ ဒေါ်ဖွား သီလရှင်ကျောင်းလေးသို့
၁၆ ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလက်စ် ရဲ့ အလှူ ဒေါ်ဖွား သီလရှင်ကျောင်းလေးသို့
Posted by Rose Minn on Nov 12, 2013 in Community & Society, Copy/Paste | 14 comments
ရွာသူရွာသားများမင်္ဂလာပါ။ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ဒါဇင်ပလပ်စ် အလှူ အဖြစ် ဒ်ီလမှာတော့ ဒေါ်ဖွား သီလရှင်ပညာရေးကျောင်း၊ ရှမ်းတဲကြီးရပ်ကွက်၊ ရွာသာကြီးမှ ကျောင်းကလေးကို ဒါဇင်ပလပ်စ် အဖွဲ့သားများ သွားရောက်လှူတန်း ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။
လှူဖွယ် စာရေးကိရိယာများ နှင့် ငွေသား နှစ်သိန်းတစ်သောင်းနှစ်ထောင် (၂၁၂၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ သွားရောက်သမျှမှာတော့ အချို့တဲ့ဆုံး ကျောင်းကလေးဖြစ်ပြီး အလှူငွေလည်း အများဆုံး ရတဲ့ကျောင်းကလေး လဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေး တစ်ရာကျော်ဆန့်တဲ့ကျောင်းဆောင် လေး
ကျောင်းရဲ့အကျယ် အ၀န်း ၂ ဧက ကို အလှူရှင်က လှူတန်းထားတာဖြစ်ပြီး။ ကျောင်းဆောင်လေး တစ်ဆောင်သာရှိပါတယ်။
ဦးစီး ပြီးစာသင်ကြားနေတဲ့ ဆရာလေး အမည်မှာတော့ ဒေါ်ကုသလ ၀တီ ဖြစ်ပြီး စာသင် ကြားတဲ့ ဆရာမမှာ ဆရာလေးနှစ်ပါး နှင့် ဆရာမ (၅) ဦး ထဲသာကလေးများကို စာသင်ပေးပါတယ်။ အတန်းများမှာ တော့ (လေး )တန်းအထိ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားဦးရေမှာ
၁) သူငယ်တန်း (၈၁)ယောက်
၂) ပထမတန်း (၄၉)ယောက်
၃) ဒုတိယတန်း (၁၈)ယောက်
၄) တတိယတန်း (၁၃) ယောက်
၅) စတုထ္ထတန်း (၄ ) ယောက်
စုစုပေါင်း ကျောင်းသားဦးရေမှာ (၁၆၈)ယောက် ရှိပြီး။ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းသား ကတော့ ယောင်္ကျားလေး (၂)ယောက်သာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းကလေး မှာအလွန်သေးငယ်သော ကျောင်းဆောင်ကလေးဖြစ်ပြီး ကလေးငယ် တစ်ရာကျော် အတွက် စာသင်ခန်းမှာ အလွန်ကျဉ်းလှ ပါတယ်။
အရင် နှစ်တွေမှာတော့အုပ်ဖုတ်စက် အလုပ်သမားမိသားစုများ မှကလေးငယ်များ လာရောက်အတန်းတက် သောကြောင့် ကျောင်းသားနှစ်ရာကျော်ရှိသည်ဟု ဆရာလေး ကပြောပြပါတယ်။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတော့ အနီးနား ကလေးများ အတွက်ယဉ်ကျေးမူသင်တန်း တွေလည်း အခါသင့် လျှင်ဖွင့်ပေးပါတယ်။
ကျောင်းကလေးမှာ ကားလမ်းနှင့်အလွန်လှမ်း ပါတယ်။ အရင်က မိုးတွင်း ကာလ ရေကြီးချိန် ဆိုလျှင် ကားလမ်းမ ပေါ်သွားရန် လှေနှင့်သွား ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လည်း ကျောင်းလေးကိုသွားရန် ကားဝင်ဖို့ အတော်လေး စိတ်ထင့် ခဲ့ပါတယ်။ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှသာ မြေကြီးမာမာ နှင့် သွားနိုင်ပါတယ်။ လမ်းများလည်း သိပ်မကောင်း သေးပါ။ သွားလာနိုင်ရုံ သက်သက်သာ မြေကြီးဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်လေးမှာလည်း အကြမ်းထည်သာ ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတသိုက် ကျောင်းပေါ်တက်ချိန်မှာ ကျောင်းလေးက တော်တော်လေးလူပ်နေ၊ အိနေ ပါတယ်။ ကျောင်းလေး အတွက် အလှူရှင်များ လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ကျောင်းကလေး သာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အလှူရှင်၊ လမ်းအလှူရှင်၊ ကလေးငယ်များအတွက် စာရေးကိရိယာ အလှူရှင်၊ ပရိဘောဂ အလှူရှင် စတဲ့ မိမိတို့တက် စွမ်းသမျှ လှူတန်းနိုင်ရန် အတွက် ကုသိုလ် အကျိုးမျှော် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီ အားပေးကြပါနော်
ရို့စ်မင်း တို့ခြင်း ဗျို့လင်း ညှို့သွင်း..
မရို့စ်ရေ … အဲ့ကျောင်းလေးက သွားခဲ့သမျှ ကျောင်းထဲမှာ အချို့တဲ့ဆုံးလို့ ဆိုရမယ်နော် … ။ လွင်တီးခေါင်ပြင်မှာ ဆောက်ထားပြီး ၊ ကျောင်းဆောင်ဆိုလို့ ယိုင်နဲနဲ့ တဆောင်ပဲ တွေ့ ခဲ့ရတယ် … ။ ကိုယ်တွေ လူဆယ်ယောက်ဝန်းကျင်တက်လိုက်ကြတာတောင် … ကျောင်းလေး သိမ့်သိမ့်ခါလို့ပေါ့ ။
တကယ့်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ ကျောင်းမျိုးပါပဲ … ။
အဲလိုကျောင်းမျိုးလေးကိုလှူရတဲ့အတွက် ပီတိဖြစ်ရတာ။ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကျောင်း လေးတွေ ကို ဆက်လက် Discovery လုပ်ကြအုံးဆို့ရယ် နော်။
အခုတလော သွားနှုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ နောက်ချန်နေခဲ့ရတာ အရမ်းများနေဘီ။
နောက်လ သများအလှူလိုက်တဲ့အခေါက်ကျမှ အလှူပီး အိမ်ပြန်လုပ်ရင်တော့ အတွေ့ဘဲ ညင်း…ညင်းး
ရှားပါးနေရာကို သွားနိုင် လှူနိုင်တာ။
အပြန် ခရီးက ဓာတ်ပုံလေးတွေပါ တင်ပေးပါနော်၊။
အရင်လကတည်းကလှူဖြစ်ဖို့နော်။ ဒီကျောင်းလေးနဲ့ ကံစပ်တယ်။
အရင်က.. ယူအက်စ်ရောက်ခါစမြန်မာ ပြောင်းခိုသူ(Refugee) တွေကို.. အ၀တ်အစားတွေ..အသုံးအဆောင်တွေသွားလှူတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်..။
အခု..အဲဒီ ပြောင်းခိုသူတွေ. ယူအက်စ်မှာ.နှစ်ကြာတာနဲ့အမျှ..အလုပ်နဲ့အကိုင်နဲ့..အခြေကျကုန်ပြီမို့.. မလိုတော့ဘူးပေါ့လေ..။
အဲဒီအ၀တ်ဟောင်းသစ်..ကလေးအရုပ်ဟောင်းသစ်တွေ.. မြန်မာပြည်ပို့လှူရင်ကောင်းမလား.. တိုင်းပင်ကြည့်နေပါတယ်..။
စာသင်တဲ့.. စာအုပ်ဟောင်းတွေ.. ကလေးအသုံးအဆောင်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့..။
သဂျီးတိုင်ပင်တဲ့ ကိစ္စအဆင်ပြေပါစေ ဗျာ့ ။
လိုအပ်တဲ့နေရာ ရောက်ရပါစေ့ မယ်လို့ ။
သဂျီးတေး တာလေး. တည်လာဖို့ မျှော်လင့်နေပါကြောင်း ။.
ဒီလအတွက် ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းလေးပါပဲ ….
ကျောင်းလေးက တစ်အားသေးပီးကျဉ်းလို့ ကလေးတွေစာသင်ရတာ အတော်ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း နိုင်မှာပါပဲ ကိုယ်တွေလူလေး (10)ယောက်လောက် တက်သွားတာတောင် ကျောင်းကလေးက ခါနေတာ
ဒီကြားထဲ ကိုဖက်ကြီးက စကားပြောရင်း တစ်အား၇ီနေတော့ သူနားတောင် ကပ်မထိုင်ရဲဖူး :p
ကလေးတွေစာသင်တဲ့အချိန်ဆို စဉ်းစားမိတယ်။ ဘယ်လိုများနေမလဲနော်။ စာသင်လို့တောင်ရပါ့မလား။ အတန်းပေါင်းစုံက ဆရာမတွေလဲ ကလေးတွေကို ဘယ်လို ကြားအောင်အော်လည်းနော်။ လော်စပီကာတပ်ပြီးအော်ရမလားပဲ ကြမ်းခင်းနင်းချိန် နဲ့ ကိုဖက် ရီချိန်ဆို အသက်အောင့်ထားရတယ်…ဟဲဟဲ နောက်ထှာနော် ဘွတေး
သာဓု ခေါ်လျက်ပါ..ဒါဇင် + ရေ…